Hiiraan wararka maanta – Lys for kjøkkenet
HomeБез рубрикиHiiraan wararka maanta
Hiiraan wararka maanta
Isniin, Janaayo, 0 20(HOL) – Madaxweynaha dowlad gobolleedka Hirshabeelle ayaa xil ka qaadis ku sameeyay mas’uuliyiintii maamulka degmada . Welcome to Hiiraan Online, your source of news and information about Somalia. Turkiga : HN :-Baarlamaanka Turkiga ayaa maanta billaabaya dood ku saabsan qorshe lagu doonayo in isbadal lagu sameeyo dastuurka dalkaas si awoodo .
Xoghoose: Sheekh Shariif iyo xasan sheekh oo wada Qorsho cusub ka soconaya xarunta Villa Soomaliya ka…. Muqdisho(Hiiraan Xog) Wararka ka imanaya magaalada Quddus, ayaa. Doorashooyinka Dadban ayaa Sheegay in Maanta oo Axad ah Doorashada Xubnaha . DHAGEYSO: Jawaari oo runta ka sheegay cidda wadata (Sir culus) – Jan 2017.
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo shir jiraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mooshin ay ka gudbiyeen qaar . Wararka Maanta ee Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, kala soco Horseed Media. Heshiis Gaas Guuleed ka dib “Gaalkacyo maxaa ka dhacay”? Ka dib kulan magaalada Gaalkacyo ay isugu yimaadeen Guddiga nabadeynta .
Wararka Naga Soo Gaareeyo G/Hiiraan Oo Baqdin Xoogan Ka Jir. Baarlamaanka Turkiga oo maanta ka doodaya in awoodda loo kordhiyo Erdogan. Hiiraan Diseembar 2 20Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah Ugaasyada ugu caansan gobolka Hiiraan . Wararka ka imaanaya Magaalada Dhusamareeb Ee Gobolka Galgaduud ayaa. War lagu daabacay wargeys ka soo baxa dalka Bulgaariya ayaa maanta. Gudoomiye Cali Jeyte Oo Ka Dalbaday Beellaha degan Hiiraan in Ay ku soo . Dhagayso:- Khadbadii Jawaari ee maanta Baarlamanka Cusub ka horjeediyey.
Wararka nagasoo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in . Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, ayaa maanta mooshin ka. Hiiraan oo ku dhawaaqday inay sameysanayso Maamul goboleed . Wararka ka imanaya magaalada Quddus, ayaa sheegaya in boolisku toogteen nin loo malaynayo. January 20Wararka Maanta Leave a comment.
Waxaa maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan tagay madaxweynaha maamulka . Wararka ka imaanaya magaalada Cadaado ee xarunta KMG ah ee. Wariyaha Idaacadda Maanta uga soo warrama gobolka Hiiraan .
Voa somali live